Mudane Wasiir:- Qaadka Iyo Maceeshadda Daruuriga Ah Iyamaa Kula Fudud??
Tuesday April 10, 2018 - 16:14:40 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Xukuumadda Somaliland ayaa shalay soo saartay warsaxaafadeed ay ku muujisay inay korhisay cashuurta sarrifka ee maciishadda daruuriga iyo badeecadaha kale ee inta badan la isticmaalo.
Warsaxaafadeedka xukuumadda oo uu wasiirka maaliyaddu ku saxeexnaa ayaa sidoo kale lagu sheegay inaan shidaalka iyo qaadku ku jirin badeecadaha cashuurta lagu kordhiyey, waxaanay lagu sheegay warqadda in 40% lagu kordhiyey badeecadaha aan daruuriga ahayn, halka maceeshadda maalin laha loo isticmaalana lagu kordhiyey 20%.
Taas ayaa ka dhigan in qiimaha sarrifka cashuurta ee badeecaha daruuriga ah la xisaabin doono $1= 6,000 SLShilling ah, halka markii hore $1 la xisaabin jiray 5000 SLShilling, waana qiimaha sarrifka ee maciishadda daruuriga ah lagu cashuuri doono, halka badeecadaha kale ee aan daruuriga ahayna $1 la xisaabin doono 7,000 halkii uu markii hore ka ahaa 5000 SLShilling.
Waxaase la yaab lahayd kadib markii wasiirku sheegay inaan maceeshadda lagu kordhiyey cashuurta aanu qaadku ku jirin, waxaana xusid mudan inaanu qaadku muhiimad guud iyo mid gaar ah toona u lahayn shacabka Somaliland, isagoo ka mid ah mukhaadaraadka dadka reer Somaliland dhaqaalahooda curyaamiyey.
Waxaana iswaydiin mudan sababta aanay xukuumaddu wax cashuur kordhin ah ku samayn qaadka, iyadoo kor u qaaday cashuurta sarrifka ee maceeshadda daruuriga ah.
Geesta kale tallaabooyinka ay xukuumaddu ka soo saartay sicir bararka ayaanay ku jirin wax saamaynaya qaadka iyadoo qaadku maalin walba boqolaal kun oo dollar looga dhoofiyo xagga Itoobiya, arrimahan ayaana muujinaya in xukuumaddu ka gaabsanayso inay qaadka faragalin ku samayso, inkastoo aanay sababtu caddayn.